Lozam-pifamoivoizana teny Ambohijanaka Ilay saika hamonjy indray no voaompa ?
Nisehoana lozam-pifamoivoizana teny Ambohijanaka Atsimondrano omaly tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva.
Saika nifandona tamina fiara tsy mataho-dalana saika hiditra amin’ny tranony, dia nanapaka tampoka ny fiara marika Renault Scenic. Nahay niala anefa io scenic io fa nifatratra tany an-tanimbary, raha ny fanazavana tsotsotra. Ilay mpamilin’ilay fiara tsy mataho-dalana kosa voalaza fa nitsoaka. Nisy lehilahy nanampy ilay fianakaviana kely nisy zaza 2 naratra fa ilay lehilahy nanampy indray no voaompa sy mahazo fandrahonana, hoy ny fitantaran’ny nanatri-maso. Asa na nisy ny ahiahin’ireo tra-doza na ahoana. Ny zavatra tahaka izany anefa amin’ny lafiny iray no mampalaina ny olona tsy hiditra an-tsehatra amina fanavotana sy famonjena rehefa misy loza. Tsy tokony hohadinoina anefa fa ny fitazanam-potsiny sy tsy fandraisana andraikitra amin’ny olona tra-doza na tandindonin-doza, dia heloka eo anatrehan’ny lalàna.